7 Meelaha Ugu Fiican ee Glamping In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Meelaha Ugu Fiican ee Glamping In Europe
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 11/04/2021)
Ku soo kicinta shimbiraha heesaya, leh views breathtaking albaabkaaga, yurtada raaxada leh ama geedka geedka. Ka soo kabashada meelaha ugu quruxda badan Yurub waa isbeddel weyn maalmahan. Ku xiga 7 meelaha ugu fiican ee soo jiidashada leh ee Yurub waxay bixiyaan khibrad fasaxa bey'ada saaxiibtinimo oo raaxo leh. Oo leh koronto cagaaran, dib u warshadaynta, iyo 5-xiddig oo hudheel ah, glamping waa habka ugu dambeeya ee waari kara fasaxa Yurub.
1. Meelaha Ugu Fiican ee Glamping In Europe: Seeraha Dabiiciga ee Veluwe ee Nederland
Cashada shumaca ee kaynta xiisaha leh ee Veluwe, ku dhex lugeynaya geedaha iyadoo leh falaadhaha cadceedda ee ugu horreeya. Tani dhammaantood waa qayb ka mid ah waayo-aragnimada soo jiidashada riyada ee ugu horreysa park qaranka Netherlands. Waad dooran kartaa inaad sahamiso 2 keydka dabiiciga: Veluwezoom National Park with the most beautiful viewpoint the Posbank, ama Hoge Veluwe, janno loogu talagalay hiwaayadda socodka.
Waqtiga ugufiican dhulalkaas, waxaad dooran kartaa inaad sii joogto yurtooyinka quruxda badan, teendhooyinka safari ama guryaha dhirta, kala soocista fursadaha hoyga ee Veluwe. Tusaale ahaan, ah Schenkenshul keydka dabiiciga, dhow Hoenderloo, waa barta ugu fiican ee loogu talagalay xero qoys, adoon ka quusan tas-hiilaadka guriga iyo raaxada.
2. Echologia Glamping Spot In Faransiiska
Bananka kaydka ugu weyn biyaha ee Mayenne, waxaad heli doontaa hoy quruxsan oo bey'adeed leh. Dooxada La Loire waxaad dooran kartaa inaad ku nagaato qol dabaasha ah, qol kaynta, ama teendho raaxo leh.
Quraacda dusha sare, doonida webiga dhexdiisa, ama inaad ku raaxeysato hal galaas oo khamri ah waa uun dhowr ka mid ah faa'iidooyinka aad heli doontid markaad halkan ku nuuxnuuxsanayso. Dooxada La Loire waa gobolka khamriga ee France, sidaas darteed, khamriga ugu fiican ee aagga ayaa dhowr tallaabo u jira teendhadaada ama qolkaaga raaxada. Echologia waa meel aad u fiican soo dhaweynta safra Solo ee France, iyo fasaxa qoyska.
Nantes to Tours Tareen
Lille to Tours Tareen
Lille ilaa Paris Tareenka
3. Meelaha Ugu Fiican ee Glamping In Europe: Glamping jacayl ah oo ka socda Rhone-Alpes France
Ku seexashada xiddigaha hoostooda, kuleylka kuleylka markay barafka dibedda ka dhaceyso, Alps-ka Faransiiska waa meel siraad sixir leh u soo jiidanaysa. Aagga Rhone ee ku yaal buuraha Alps ee Faransiiska waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee soo jiidashada leh ee Yurub. Sayidka, waxaad ku heli kartaa fasaxaaga caadiga ah ee jiilaalka ee ku yaal qubbad cagaaran oo qurxoon ama teendho dawan.
Si kastaba ha ahaatee, hadaad doorbideysid fasaxa guga, markaa waxaad gabi ahaanba jeclaan doontaa buuraha Alps. Haysashada qaxwahaaga subaxdii, ku hareereysan dabeecadda duurjoogta ah, waa mid ka mid ah khibradaha ugu wanaagsan nolosha. Intaa waxaa dheer, fasax aad u firfircoon, waxaad ka fuuli kartaa buuraha quruxda badan ama waxaad isku dayi kartaa inaad dhex maro Wabiga Ardeche.
Maaddaama ay u dhexeyso Talyaaniga iyo Faransiiska, waxaad ka heli doontaa mid aad u fudud inaad ugu safro tareen.
Paris si Provence Tareenka
Lyon inay Provence la Tareen
Marseilles oo lagu tababarayo tareen
4. Glamping Bartamaha Bohemia, Prague
Bohemia waa gobol kaar boosto ku yaal Czech Republic. U gaar ahaanshaheeda waxay ku taal meesha aagga si loogu beddelo dharka isbeddelada xilliyada. Xilliga kuleylaha waxaad ka heli doontaa mid cagaaran oo qurux badan, and in the fall in beautiful golden and orange tones. On the banks of a lake, buuraha dushooda, ama keyn gooni ah, Oasis-ka Bohemia wuxuu saacad kaliya uga jiraa Prague, sidaa darteed waxaad ku raaxeysan kartaa adduunka ugu fiican, qalbiga dabiiciga ah.
Waxaa ku yaal hoy aad u fara badan oo hareeraysan hareeraha harada Lipno ama agagaarka buuraha Jizera. Sayidka, waxaad ku raaxeysan laheyd harada weyn iyo aragtida kaynta, laga bilaabo terrace-kaaga, ama barkad kulul oo dabiici ah.
5. Meelaha Ugu Fiican ee Glamping In Europe: Qaybaha Rinjiga Rinjiga Ee Alps Switzerland
Meelaha dhaadheer ee ugu fiican, aragtida ugu fiican, midig albaabka qubbad glamming aad. The Alps Swiss waa meel sixir loo socdo xilli kasta, oo hadda waad iska sii joogi kartaa xarunta. Halka buuraha Swiss ay yihiin meel caan ah oo dalxiis loogu tago dalxiisayaasha adduunka oo dhan, in aad u yar baa ka garata inay tahay meel gilgilaysa.
Hoyga soo jiidashada leh ee buuraha Alps si buuxda ayaa loo qalabeeyay oo loogu talagalay xasillooni, iyo joogitaan layaableh. Waad joogi kartaa inta lagu jiro daboolka barafka, laakiin gudaha qolkaaga raaxada ah, waxay noqon doontaa diirimaad iyo raaxo. Waxaad ku soo toosi doontaa muuqaal qurxoon, socod toos ah sariirtaada raaxada leh, quraac macaan kadib.
Muuqaalka, hawo nadiif ah, iyo wadiiqooyin isku dhafan waxay ka dhigayaan buuraha Swiss Alps mid ka mid ah 7 meelaha ugu fiican ee soo jiidashada ee Yurub.
Zurich ilaa Wengen Tareen
Geneva ilaa Wengen Tareen
Bern to Wengen Tareen
Basel ilaa Wengen Tareen
6. Teendhada Nalalka raaxada ee Puglia
Waxay ku taal meel u dhow badda Adriatic iyo Ionian, Puglia waa a meel riyo ah fasaxii ugu xiisaha badnaa ee Yurub. Dhawaaqa mowjadaha, biyo buluug ah oo aan nadiif ahayn, neecaw fiidnimo, iyo cuntada Talyaaniga, way heli kartaa wax kasta oo ka fiican tan. Inkastoo, Taambuugga dhexdiisa teendho raaxo leh, ku raaxeysiga qiimaha hudheelka, adiga oo aan wax u dhimayn miisaaniyadaada – Glamping waa habka ugu dambeeya ee fasax loo qaato maalmahan.
Puglia waa meel aad u qurux badan oo wax nuujiya, teendhadaada uga baxa xeebta ama buurta dusheeda ee badda fiirisa, waa riyada qofkasta. Waxaad ka heli doontaa fursado badan oo hoy nuujin ah tuulada Apulia.
Biyo-dhaca badda waxaa tareenka ka heli kara Rome iyo Bari.
Rome oo ku socota Puglia Tareen tareen ah
Naples ilaa Puglia Tareen
Bari ilaa Puglia Tareen
Florence ilaa Puglia Tareen
7. Jacayl Iyo Glamping In Tuscany
Jacaylku waa eray qeexaya soo bixida ugu fiican Tuscany. Meel aan ka fogeyn Sienna, iyo badda Mediterranean, ee buuraha cagaaran ee jilicsan ee Tuscany, sugaya teendhooyin jacayl iyo cagaar ah oo fasax ah 2.
In Tuscany, waad raadin kartaa raadinta gawaarida waaweyn, take a cooking class and prepare pasta for dinner. Haddii kale, waad wareegi kartaa tuulooyin Talyaani qurux badan kaaga Glamping Olive caajis site. Waxaa intaa dheer, Ka soo kabashada Tuscany waxay kaa dhigeysaa inaad dareento qayb ka mid ah dabeecada, geedka geedka saytuunka ah gadaashiisa.
Florence ilaa Grosseto Tareen
Perugia ilaa Grosseto Tareen
Viterbo ilaa Grosseto Tareen
Rome ilaa Grosseto Tareenadu A
halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonaa inaan kaa caawino qorsheynta fasaxaaga 7 meelaha ugu fiican ee muraajicinta Yurub tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada blog-ka "7 Meelaha Ugu Fiican ee Isku-Xidhka Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-glamping-places-europe%2F%3Flang%3Dsoየሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
BestGlampinginEurope kaamam GalmpingPlacesInEurope glamping GlampingDestinationsEurope GlampingPlaces LuxuryCampingEurope teendhooyin Winterholiday
Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareenka Safarka Switzerland, safarka Europe